အဘယ်ကြောင့်ဝက်ဘ်ဆိုက် RFPs အလုပ်မလုပ်သလဲ
အင်္ဂါနေ့, မေလ 14, 2013 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 15, 2013 မိုက်ကယ် Reynolds က
တစ်ဦးအဖြစ် ဒီဂျစ်တယ်အေဂျင်စီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကတည်းကရာနှင့်ချီသောကော်ပိုရိတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်မယူသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုဖန်တီးရန်အခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်များစွာသောသင်ခန်းစာများကိုသင်ယူခဲ့ပြီးကောင်းစွာဆီထားသောစက်ဆီသို့ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရရှိခဲ့ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ် ဦး နှင့်အတူစတင်သည် Website အသေးစိတ်ပုံစံ, ကျွန်တော်တို့ကအချို့သောကန ဦး ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအလုပ်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ကိုးကားခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်း၏လမ်းကိုဆင်းဝေးမတိုင်မီဖောက်သည်နှင့်အတူအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို hammer ။
ဒီဖြစ်စဉ်ကတကယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုပေမယ့်မကြာခဏဆိုသလိုကြောက်လန့်နေသော RFP ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်သည်။ မည်သူမဆို RFPs ကိုချစ်ပါသလား ကျွန်တော်အဲဒီလိုမထင်ပါဘူး ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်စီမံချက်ကိုလိုအပ်သောအချိန်တွင်၎င်းတို့သည်အစပြုမှုကိုရှာဖွေနေသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဆက်လက်ရှိနေသည်။
ဒီမှာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု - ဝက်ဘ်ဆိုက် RFP တွေကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ သူတို့ကဖောက်သည်အတွက်မကောင်းဘူး၊ အေဂျင်စီအတွက်မကောင်းဘူး။
ငါပြောနေတာကိုသရုပ်ဖော်တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။ မကြာသေးမီကသူတို့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အကူအညီတောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့လာလာသည်။ ၎င်းတို့တွင် RFP ကိုအတူတကွထားရှိခြင်း၊ စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ ထူးခြားသောတောင်းဆိုမှုများနှင့်ပုံမှန်လိုချင်သောဆန္ဒစာရင်းများဖော်ပြထားသည် (စံကောင်းဟောင်း -“ ငါတို့ website အသစ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူကြည့်ရှုနိုင်စေချင်တယ်”) ရှိသည်။
ဝေးလေကောင်းလေ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်စျေးနှုန်းမကျူးလွန်မီကျွန်ုပ်တို့အားအတိုင်ပင်ခံခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်းနှင့် site မြေပုံရေးဆွဲခြင်းအချိန်အနည်းငယ်ပေးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော website အသေးစိတ်ပုံစံဖြင့်စတင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့သည်။ RFP ကိုယာယီနေရာချကာအသေးစိတ်ပုံစံဖြင့်စတင်ရန်သူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးအသေးစိတ်အစီအစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသောပန်းတိုင်အချို့ကိုရှာဖွေပြီးမေးခွန်းများမေးကာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခြေအနေများကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးစဉ်အတွင်း RFP မှအကြောင်းအရာအချို့သည်သူတို့မေးခွန်းအချို့ကိုဖြေ ဆို၍ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်နှင့်အမျှ RFP ရှိအချို့သောအရာများသည်မလိုအပ်တော့ကြောင်းထင်ရှားလာခဲ့သည်။
RFP တွင်မပါ ၀ င်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်အသစ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအနေဖြင့်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကို“ အကောင်းဆုံး” လုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အစီအစဉ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုတည်းသောစာမျက်နှာတွင်ရှိနေကြောင်းသေချာစေခြင်းကြောင့်အလွန်ကျေနပ်မိသည်။
ဒါ့အပြင်သုံးစွဲသူရဲ့ငွေကိုချွေတာနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ RFP အပေါ်အခြေခံပြီးစျေးနှုန်းကိုးကားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းအတွက်အမှန်တကယ်မမှန်ကန်သောလိုအပ်ချက်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီးလိမ့်မယ်။ အဲဒီအစားကျနော်တို့ကပိုကောင်းတဲ့မထိုက်မတန်နှင့်ပိုမိုကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သောနှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ကြောင်းအခြားနည်းလမ်းများကိုသူတို့နှင့်အတူတိုင်ပင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမြင်ကွင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါတွေ့မြင်ရပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုအလွန်ကျူးလွန်သောကြောင့်ဝက်ဘ်ဆိုက် RFP များကိုမယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤတွင် RFP များ၏အခြေခံပြproblemနာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အကူအညီတောင်းခံသည့်အဖွဲ့မှရေးသားထားသော်လည်းမှန်ကန်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ကြိုးစားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းပြင်ဆင်မှုလုပ်ရန် wizard လိုအပ်ကြောင်းသင်မည်သို့သိသနည်း။ သငျသညျအဖွဲ့ဝင်များကသာareaရိယာထည့်သွင်းရန်လိုသလား? ဘာကြောင့်ဒီအင်္ဂါရပ်အပေါ်မှာဒီအင်္ဂါရပ်ကိုရွေးခဲ့တာလဲ ၎င်းသည်ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုသမှုခံယူရန်ဆရာ ၀ န်သို့သွားခြင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည်၊ သို့သော်သူ၏ရုံးသို့မသွားမီသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆေးဝါးများတောင်းခံခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည် website အသစ်တစ်ခုကိုစီစဉ်နေလျှင် RFP အလေ့အထကိုဖျက်ပစ်ရန်ကြိုးစားပါ။ စကားစမြည်ပြောခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်းစခြင်းဖြင့်စတင်ပါ နှင့် သင်၏အေဂျင်စီ (သို့မဟုတ်အလားအလာရှိသောအေဂျင်စီ) နှင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်စီမံကိန်းအတွက်ပိုမိုခေတ်မီသောချဉ်းကပ်နည်းကိုယူပါ။ များသောအားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်ကိုသင်ရရှိနိုင်တယ်၊ သင်ငွေအနည်းငယ်စုဆောင်းမိနိုင်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
မေလ 14, 2013 မှာ 5: 25 pm တွင်
ကျွန်တော်သဘောမတူပါ။ RFP များသည် ဝဘ်ဆိုက်များအတွက် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော အကြံဉာဏ်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်၊ ၎င်းတို့သည် မည်သည့်ပရောဂျက်အတွက်မဆို ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော အကြံဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကြောင်းအရင်းကတော့ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေပါပဲ။ သို့သော် ဤတွင် RFPs အလုပ်မလုပ်ရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာ- client သည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ပြီးပြီဟု ယူဆပါသည်။
သင်အကူအညီမပါဘဲ ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်လျှင် သင်လိုအပ်သည်ဟု သင်ထင်မြင်နေသော အကူအညီအပေါ် သင့်ရှုထောင့်က မည်သို့ပြောသနည်း။
မေလ 15, 2013 မှာ 1: 48 pm တွင်
တုံ့ပြန်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည် Robby။ ဟုတ်တယ် ငါသဘောတူတယ်... ငါသိတာတွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ထားချင်တယ်🙂
မေလ 14, 2013 မှာ 6: 29 pm တွင်
ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုအတွက် RFP ကို ​​အခြေခံ၍ အဆိုပြုချက်တစ်ခု ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရောဂျက်အလုပ်ထက် ဆက်နွယ်မှုပိုရှိလိုသောကြောင့် သုံးစွဲသူက ပိုမိုကြီးမားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခု လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
မေလ 15, 2013 မှာ 7: 51 AM
မေလ 16, 2013 မှာ 11: 47 AM
ကောင်းကောင်းပြောတာ။ ဤသည်မှာ ဝဘ်ဆိုက်များ… နှင့် လုံးဝကုန်စည်မဟုတ်သော အခြားထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတိုင်းအတွက် မှန်ပါသည်။ RFP များသည် ပမာဏကို ဆန့်ကျင်သော အရာများကို စာရင်းဇယားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် ကြိုးပမ်းသည် (ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို စာရင်းဇယားတွင် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်)။ သံရိုင်းအမှုန့်များပါသော ရထားလမ်းကားတစ်စီးကို ကိုးကားမတောင်းထားလျှင် (ထို့ထက်ပင်မဟုတ်ပေ!)၊ သင်သည် သင်ယုံကြည်ရသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး ၎င်းတို့ကို လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အကြံပေးများအဖြစ် ခွင့်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ မဟုတ်ပါက၊ ရလဒ်သည် "စာရွက်ပေါ်တွင်ကြည့်ကောင်းသည်" ဖြစ်သော်လည်း လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင် ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါ။
မေလ 16, 2013 မှာ 12: 43 pm တွင်
ကြိုက်တယ်! ကျေးဇူးပဲ ခရစ်။
မေလ 16, 2013 မှာ 12: 23 pm တွင်
နိဂုံးချုပ်- ဖောက်သည်အများစုသည် သူတို့လိုချင်သောအရာကို အမှန်တကယ်မသိကြသော်လည်း အများစုမှာ ၎င်းတို့လိုအပ်သည်များကို မသိကြပေ။ အေဂျင်စီများမှ ထာဝရဧဝံဂေလိတရားဟောပြောခြင်း....